Sida loo rakibo shahaadada dhijitaalka ah taleefanka Android | Androidsis
Miguel Hernandez | | Tababarada
Shahaadada Dijital ah Waxay noqotay mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan uguna caansan amniga muddooyinkii ugu dambeeyay, waana mid aad iyo aad muhiim u ah in la awoodo in lagu fuliyo hanaan fara badan oo nooc walba leh iyada oo loo marayo aaladaha gacanta iyadoo aan loo baahnayn in wax laga qabto nooc kasta oo maamulka dadweynaha ah.
Sidaa darteed, waxaa si gaar ah xiiso leh inaan maareeyno inaan ku dhejino Shahaadada Dijital ah sidoo kale taleefankayaga. Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu rakibeyso Shahaadada Dijital ah taleefankaaga Android habka ugu fudud ee ugu macquulsan, sidaas darteed waxaad ku fulin kartaa habab aan la tirin karin sida ugu dhaqsaha badan uguna nabdoon.
1 Waa maxay Shahaadada Dijital ah?
2 Ka hel Shahaadada Dijital ah Android
3 Ka soo qaado kombuyuutarka oo ku rakib Android
4 Ku isticmaal DNIe on Android
Waa maxay Shahaadada Dijital ah?
Inaad awood u yeelatid inaad ku shaqeysid teknolojiyaddan xiisaha leh, maxaa ka yar tan koowaad Aan si cad u qeexno nooca softiweer ee aan la shaqeyneyno. Waxaad maqashay waqtiyo aan la tirin karin oo ku saabsan Shahaadada Dijital ah, runtiina bogag badan oo ka mid ah maamullada guud, ha ahaadeen kuwa degmo ama gobol, waxay ku siinayaan fursad aad ku isticmaasho qaabkan aqoonsi si aad ugu fuliso howlaha qaab elektaroonig ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inaadan aqoon waxa ay ka hadlayaan, waana taas sababta aan maanta u nimid, si aan kuu barinno waxa ay tahay Shahaadada Dijital ah.
Shahaadada Dijital ah ee FNMT (Warshada Lacagta Qaranka iyo Shaambada) Waa hab laguugu aqoonsado naftaada bog kasta oo shabakad ah hab aamin ah. Sida iska cad, looma jeedin in lagu galo koontadaada 'Instagram', laakiin waa halkii markii degelkan ay ku jiraan macluumaad si gaar ah ugu nugul asturnaanta isticmaalaha, sida Khasnadda, DGT ama Golaha Magaalada ee waajibaadka saaran. Asal ahaan waa sida aqoonsikeena dijitaalka ah, sida DNI-geena qaab software ah. Marka la soo koobo, waa aqoonsi buuxa oo ah qofkaaga qaab dijitaal ah, maadaama aqoonsigaagu noqon karo markii aad damacsan tahay inaad jir ahaan isku aqoonsato meel uun. Tani waa wax cajiib ah in la awood u yeesho hagaajinta hanaankeena nooc kasta.
Ka hel Shahaadada Dijital ah Android
Waxaan fursad u leenahay inaan si toos ah ugu helno Shahaadadeena Dijital ah aaladda Android, wax si weyn u dedejin doona habraacyada. Ilaa dhowaan waxay suurtogal ahayd oo keliya in lagu helo Shahaadada Dijital ah iyada oo loo marayo kombiyuutarada iyo xaalado aad u adag oo sababay in adeegsadayaal badani ay joojiyaan isku dayga. Si kastaba ha noqotee, waa wax cajiib ah sida ugu fudud ee aan ugu heli karno Shahaadada Dijital ah si toos ah iyada oo loo marayo Android iyadoo la adeegsanayo nidaamka ay Lacagta Qaranka iyo Warshad Shaabadu noo diyaarisay, tan awgeed waa inaan kala soo baxnaa arjiga soo socda:
Codsiga Android: Helitaanka Shahaadada FNMT
Markaan galno arjiga, waxay kaliya na siin doontaa laba ikhtiyaar: Codsi / Codsiyo Codsi. Xaaladdan oo kale, waxa aan samayn doonno waa kuwan soo socda:
Waxaan ka helnaa Shahaadooyinka Root-ka FNMT oo ku rakibnaa annaga Android adoo ka soo degsanaya Google Play Store.
Waxaan u fureynaa arjiga si aan u helno shahaadada FNMT
Guji badhanka «Codsi»
Waxaan buuxineynaa xogta u dhiganta DNI ama NIE, magaceena koowaad iyo emayl aan gadaal uga baahanahay.
Waxaan dooraneynaa xafiiska diiwaangelinta ee la oggol yahay inuu caddeeyo aqoonsigayaga shaqsi ahaan waxaana la raaci doonnaa DNI-gaaga iyo nambarka ay noo soo direen DNI.
Marka aqoonsigeena la caddeeyo, waxaan ku laabannaa arjiga oo gujinnaa "Codsiyada la sugayo"
Hadda waxaan u soo degsan karnaa Shahaadadeenna Dijital ah habka ugu dhakhsaha badan
Sida aad aragto, Waa lama huraan kiisaska oo dhan inaad isku aqoonsatid shaqsi ahaan DNI ama NIE si aad u oggolaato soo dejinta, waxaad ka heli kartaa khariidadda is-dhexgalka ee xafiisyada aad ku caddeyn karto aqoonsigaaga Shahaadada Dijital ah khariidada is-dhexgalka.
Shaqadu halkan kuma dhamaanayso, si loogu sii wado rakibo Shahaadadaada Dijital ah ee leh talaabooyinka soo socda:
Ka soo deg linkiga arjiga ee aan horay uga soo hadalnay
Dhagsii aqbalida iyo "Codsiyada iyo VPN"
Waxaa si dhakhso leh oo fudud loo rakibi doonaa
Waxaan kugula talineynaa inaad ku dhejiso shahaadada xididka qalabka Android ama kaarka xusuusta SD, ilaa Shahaadooyinka laga helo Android lama dhoofin karo, kaliya waa la tirtiri karaa lana keeni karaa, markaa ma awoodi doonno inaan ugu isticmaalno aaladaha kale.
Ka soo qaado kombuyuutarka oo ku rakib Android
Sida iska cad, waxaan sidoo kale si toos ah ugu soo dejisan karnaa Shahaadada Dijital ah FNMT Dijital Qofka Dabiiciga ah kombiyuutarka isla markaana ku rakibi karnaa hadhow aaladdayada 'Android', runti aniga waxay ila tahay sida ugu xiisaha badan ee loo helo dhowr nuqul oo nuqul ah oo had iyo jeer la heli karo sidaasna aan ku hubinno inaanan waligeen khasaarin shahaadadan muhiimka ah. Waxa ugu horreeya waa in la ogaado waxa Daalacashada u dhigma si ay u helaan Shahaadada Dijital ah ee FNMT ee Windows PC:
Si kastaba ha noqotee, tan waxaan marka hore u baahan doonnaa inaan ku dhejino shahaadooyinka aasaasiga ah ee FNMT kombuyuutarkayaga, iyo sidoo kale faylasha intiisa kale ee lagama maarmaanka u ah hawshan. FNMT wuxuu abuuray a Qalabka FNMT taas oo hawsha aad noogu fududayn doonta, waxa ay qabatana waa rakibida wax kasta oo aan u baahanahay sida ugu dhakhsaha badan uguna tooska badan ee suurtogalka ah.
Soo dejiso qaabeeyaha Shahaadada Dijital ah ee FNMT
Marka aan soo dejisanno oo aan rakibno dhammaan qaybaha lagama maarmaanka u ah in lagu rakibo Shahaadadeenna Dijital ah PC-ga aan doorannay, waxaan si fudud ugu sii socon doonnaa tallaabooyinka soo socda:
Waxaan galnaa shabakada si aan u codsano shahaadada dhijitaalka ah.
Waxaan soo bandhigeynaa DNI ama NIE
Waxaan galnaa magaceena koowaad sida ugu muuqata DNI ama NIE
Waxaan galnaa emaylkeena oo waxaan ku hagaajineynaa hoosta
Hadda waxaan riixnaa badhanka «Codsi dir»
Marka aan dirno codsiga, lambar codsi ah ayaa la soo saari doonaa waxaanan horeyba u qaadnay tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu helo Shahaadada Dijital ah. Tallaabada xigta waa taas shaqsi ahaan waad isku aqoonsan kartaa DNI-gaaga ama NIE-gaaga Si aad u oggolaato soo dejinta, waxaad ka heli kartaa khariiddada rasmiga ah ee xafiisyada aad ku caddeyn karto aqoonsigaaga Shahaadada Dijital ah khariidadan is-dhexgalka ah.
Ugu dambeyntii waxaad u tagtay Websaydhka Soo-dejinta Shahaadada FNMT halkaas oo haddii aad si sax ah uga aqoonsatay aqoonsigaaga xafiisyada kor lagu soo sheegay, waxaad awoodi doontaa inaad kala soo baxdo shahaadada adoo galaya DNI ama NIE, magaca ugu horreeya iyo lambarka codsi ee ay kuugu soo direen emayl ahaan.
Hadda waa waqtigii lagu rakibo Shahaadada Dijital ah, ee ku taal Android markii aan ka helnay kombuyuutarka. Tan waxaan u aadaynaa qaybta «Maamulka Shahaadada» ee qaybta «Amniga» ee shabakadda shabakadda ee aan u soo dejisannay Shahaadada Dijital ah. Kadib waxaan gujineynaa ikhtiyaarka «Dhoofinta Shahaadada oo leh fure gaar ah». Tallaabadan waxay noo oggolaan doontaa inaan ku dhigno lambar sir ah shahaadada dijital ah qaab .PFX, Haddii aad ku soo dejiso qaab .CER ah, si qaldan ayaad u sameyn doontaa waxaana kugula talineynaa inaad dib ugu laabato bilowgii.
Si aad ugu rakibto qalabkeena Android waa inaan si fudud noogu soo dirtaa faylka .PFX ee aan kala soo baxnay nooc kasta oo madal ah. Waxaan kugula talinayaa inaad ku keydiso Google Drive si aad marwalba u hesho keyd, laakiin waxaad ugu diri kartaa qalabkaaga Android eMail ama Telegram, marka aad riixdo, raac talaabooyinka soo socda:
Guji oo soo dejiso feylka .PFX
Taasina waa sida ugu fudud ee aad ku heshay Shahaadada Dijital ah kombiyuutarkaaga oo aad ku guuleysatay inaad dhoofiso si looga helo Android iyo meel kasta oo aad rabto. Nidaamkan looma sameyn karo gadaal, tan iyo Shahaadooyinka laga helo Android lama dhoofin karo, kaliya waa la tirtiri karaa lana keeni karaa, markaa ma awoodi doonno inaan ugu isticmaalno aaladaha kale.
Ku isticmaal DNIe on Android
In kasta oo Shahaadada Dijital ahi ay tahay tan ugu faa'iidada badan, si aan uga baxno dhibaatada waxaan u isticmaali karnaa akhristaha NFC ee aaladda Android si aan isugu aqoonsanno DNIe. Si tan loo sameeyo, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa soo dejinta barnaamijka u dhigma:
Ku hel barnaamijka DNIe ee loogu talagalay Android.
Hadda waa inaan hubinnaa inaan haysanno lambarka sirta ah ee ay na siinayaan markii aan helno DNI waqtigaas, waxaanan qaadnaa tallaabooyinka soo socda:
Fur arjiga oo xulo meesha aad rabto inaad gasho
Xulo ujeeddada aqoonsiga
Isku cadee DNIe-gaaga
Gali nambarka galitaanka ee lagaa siiyay saldhigga booliiska markii aad sameysid DNIe-gaaga
Hadda waxaad si otomaatig ah u heli doontaa adeegga aad dooratay sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud, sidaa darteed waxaa si buuxda laguugu aqoonsan doonaa aqoonsigaaga. Nasiib darrose, ma jiraan maamullo badan oo si buuxda ula jaan qaada DNIe xilligan, in kasta oo hubaal ay dhowaan kori doonaan marka la eego baahiyaha isticmaalayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo rakibo shahaadada dhijitaalka ah taleefanka Android